I-Flirtymania - Ukuba ngumsakazi we-webcam
Yiba ngumsakazi we-webcam yeFlirtymania
Thola kusuka ku-$ 500 ngesonto. Noma kunini, noma kuphi
I-Flirtymania yiphrojekthi ye-webcam ezimele. Abasakazi bathola zonke izinkokhelo, azikho izinhlangano noma abalamuli ezidingekayo
Awekho ama-CV noma izingxoxo - ulawula imali yakho. Uhlelo lokusebenza luyatholakala ngezilimi ezingu-17 kuwo wonke amapulatifomu athandwayo, kufaka phakathi amaselula. Sakaza nge-iOS, i-Android noma i-laptop yakho. Ukucindezela ababukeli akudingekile nhlobo.
Imali engenayo yomsakazo evikini ngalinye
Thola imali ku-intanethi
Uthola imali yesibili wokuqala uqala ukusakaza. Uma izithameli zakho zisebenza ngokwengeziwe, ziphakamisa imali yakho yokugcina.
Ababukeli bakhokha umlayezo ngamunye, ngakho uthola izinhlamvu zemali kuzo zonke amazwana.
Ucingo oluyimfihlo luyimali eningi njalo ngomzuzu.
Izipho ezivela kubabukeli
Ukuze ngikubonge, ababukeli bangakuthumela zemali ngokuchofoza oku-1.
Imisebenzi evela kubabukeli
Khetha imisebenzi oyilungele ukuyenza futhi ababukeli bazokuthumela imali zemali ukuze ubone umbukiso.
Iphrofayela yakho ingumthombo wemali engenayo. Thumela izithombe namavidiyo, engeza izincazelo zamanzi bese uqoqa ukubukwa.
Umsebenzisi ukhokha ngokubuka ngakunye kwesithombe noma kwevidiyo yakho; ukubukwa ngakunye okungu-50 kukhokhwa insizakalo yeFlirtymania.
Yabelana ngesixhumanisi se-Flirtymania kumanethiwekhi omphakathi, uyithumele kuwebhusayithi yakho noma uyithumele kubangani bakho ngabanye. Ngale ndlela uzothola isithakazelo ekuthengweni kwababukeli abahlanganyele.
Khetha isihloko sokusakaza kwakho
I-Flirtymania ivumela imifudlana yemikhakha ngokubonga ngokusebenza kwayo okwakhiwe. Ungakhathazeki ukuthi kufanele ukwenze ngaphambi kwekhamera! Khetha isihloko kanye nemisebenzi oyilungele ukwenza ngezinhlamvu zemali. Dala ingubo ngokusho kwekhodi yokugqoka bese uthola imali yokuxoxa nabalandeli bakho. Vumela ababukeli baqondise ukubonisa kwakho.
Asikho isikhathi sokusebenza njalo? Zama ukuzuza zemali ngenkathi wenza i-yoga noma i-pilates!
Vula impilo yakho yansuku zonke, kodwa yenza kube mnandi ukujabulisa abalandeli bakho - benze imisebenzi ababukeli bakho abayifunayo!
Unayo izinyo elimnandi? Thola izinhlamvu zemali ngokwelapha ngamaqebelengwane nama cookies! Bonisa ababukeli ukuthi uthanda kangakanani i-carbs!
E-Flirtymania umfudlana ungaqaliswa ngokuchofoza kokubili. Zama ubone ukuthi kulula kangakanani!
I-auto-translator eyakhelwe ngaphakathi
Bhala kubangaphandle ngolimi lwakho lwendabuko futhi umzi-auto-translator owakhiwe uzokwenza konke okunye.
Ukuhlanganisa amasevisi wekhamera yewebhu
Sebenza futhi uzuze kumasayithi amaningana namadivayisi ngesikhathi esifanayo. Kuphephile ngokuphelele.
Ungashintshana ngezinhlamvu zemali ezingama-6000 ngayinye ngama- $ 1. Isamba esincane sokuhoxisa yi- $ 10.
Vele ubhalise kuma-ePayments, udale i-Bitcoin yakho noma i-Yandex.Wallet kanye nokukhokha isicelo noma kunini lapho uthanda khona. Ungakwazi ngisho nokuhoxisa nsuku zonke.
Ukukhokha ngaphandle kwama-chargebacks. Thola imali engama-100%, u-Flirtymania uthatha ukubuyiselwa imali.
Iphephile futhi engaziwa
Ukuhlala engaziwa kubaluleke kakhulu kumantombazane amaningi. Nge-Flirtymania ungakhetha izinga lokungaziwa ukuthi ukhululekile kakhulu. Vele usebenzise izilungiselelo zobumfihlo ukuze uvimbele abasebenzisi abathile namazwe athile amnyama.
Engeza ukuthinta kokuqedela ukufihla kwakho - khetha isidlaliso esingavamile (esizofihla ukuthi ungubani) kanye ne-mask ephathekayo ephelele.
Angakholelwa ukuthi kulula kangaka?
Hlola bese uqala ukuthola namuhla!
Ngibhalisa kanjani njengomsakazi we-webcam?
Ukuze uqale ukusebenza awudingi i-akhawunti ekhethekile. Vele uvule uhlelo lokusebenza bese uqala ukusakaza. Abesifazane kuphela abaneminyaka engu-18 nangaphezulu abakwazi ukuxoxa engxoxweni yevidiyo. Sicela ulungele ukufakazela iminyaka yakho ngokuhlonza okufanele.
Ngabe kufanele ngibe umsakazi we-webcam ochwepheshe?
Ababukeli bethu bayakujabulela ukuhlangabezana nazo zonke amantombazane alula futhi anhle. Awudingi amathuluzi ochwepheshe ukuze usebenze engxoxweni yevidiyo.
Ingabe uhamba ngezimpahla ezidingekayo?
Akunjalo neze! Isayithi lethu livumela ababukeli baneminyaka yobudala eyi-12 nangaphezulu ukusakazwa okubukekayo akuvunyelwe.
Funda i-FAQ epheleleFunda i-FAQ ephelele
Imigomo YokusebenzisaInqubomgomo yobumfihloUkusekelaYiba ngumsakazi we-webcamI-FAQ yabasakazi be-webcamUhlelo lokubambisanaI-FAQ yabalingani bohlelo lokubambisanaThengisa okuqukethwe kwakhoCreator agreement Affiliate agreement